nametrahana ny fandaminana noho ny antony fipariahan’ny areti-mandripaka Coronavirus, raha ny fanazavana. Ny laharana miafara amin’ny 0 sy 1 no mahazo ny anjarany amin’io daty. Ny alatsinainy 20 aprily kosa ho an’ny 2 sy 3. Talata ho an’ny 4 sy 5 dia mitohy araka izay hatrany mandra-pahatongan’ny faha 28n’ny volana aprily. Azon’ireo misitraka izany amin’ny alalan’ny “virement bancaire” atao kosa ny manatitra ny “certificat de vie” manomboka izao eny amin’ny toerana mahazatra azy, raha ny fanazavana hatrany. Ireo mpandray ny antsoina hoe “Pension de veuvage” na mananontena manana laharana miatomboka amin’ny 1A, 2A, 9A kosa dia ao amin’ny RGA na “Recette generale d’Antananarivo” eo Antaninarenina kosa dia handray ny fisotroan-drononony eny amin’ny “Paierie generale annexe” Isoraka.